HVM Atsinanana : Nanamafy ny fanohanana ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaHVM Atsinanana : Nanamafy ny fanohanana ny Filoha
Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tany Toamasina ny fivoriambe sady fihaonamben’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM. Nandray anjara tamin’izany ny HVM avy amin’ny Faritra Atsinanana, mpampiantrano, sy Alaotra Mangoro ary Analanjirofo. Nahatratra 8 000 mahery kosa ireo mpandray anjara tamin’iny fivoriambe iny.
Raha ny mahakasika ilay fihaonambe indray, tamin’izany no nanambaran’ny birao nasionaly miaraka amin’ireo mpizaika ny fanamafisana ny fanohanana sy fanolorana ho kandida ho filoham-pirenena amin’ny Fifidianana 2018 ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. “Manamafy etoana fa manohana hatrany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny antoko HVM ary manolotra azy ho kandidà amin’ny Fifidianana 2018. Na izany aza anefa, izy ihany no tompon-kevitra amin’izany”, hoy ny fanambaran’ny Birao nasionaly.
Ankoatra izay, teboka efatra no nodinihina nandritra izany ka anisany ny fananganana olona ambony HVM, ny vehivavy HVM, ny tanora HVM ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Fa ankoatra ny birao nasionaly, hanangana birao rezionaly isam-paritra ihany koa ny antoko HVM. Eo ihany koa ny fanendrena mpanolotsaina nasionaly ary ny fametrahana mpandrindra rezionaly.
Etsy andaniny, nodinihina manokana nandritra ny fihaonambe sady fivoriambe koa ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitsaram-bahoaka. Voalaza fa handroso soso-kevitra mikasika izany ny antoko HVM.
Nodinihin’izy ireo ihany koa ny mikasika an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy ary nambaran’ny antoko HVM fa ny Fitsarana irery ihany no manapaka izany.
Ankoatra izay, saika tonga nanotrona iny fivoriambe iny ireo olom-panjakana ambony voafidy sy voatendry.
Mandeha ary tsy miverin-dalana ny raharaha mikasika an’i Mamy Ravatomanga eny amin’ny Fitsarana any Frantsa. Efa nambara teto fa nogiazan’ny PNF (parquet national financier) ireo trano miisa efatra any Levallois Perret, ny volana Jona lasa ...Tohiny